Waa Kuwee Dalalka Maanta Laga Soomman Yahay Ee Ay Soomaalidu Ku Badan Yihiin?!!! – War La Helaa Talo La Helaa
By Jiinoow	 On May 16, 2018
Inkastoo dadka ugu badan islaamka aysan maanta soonneyn, haddana waxaa jira dalal dhowr ah oo laga sooman yahay maanta oo sheegey in la arkay bisha.
Cidina iskuma diidi doonto in maalinta berito ah ay soon tahay, ha yeeshee kala qeybsanida maanta waxaa jira dalal badan oo Soomman maanta kuwaas oo ay Soomaalida ku nool yihiin.
Dalka Turkiga oo Soomaali badan ay ku nool yihiin, saaxiib dhowna la ah dowladda dhexe, ayaa laga oogay maalinta koobaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan, ka dib markii ay fatwo soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta dalkaas.
Sidoo kale buuraha Kalafoorniya (Calafornia) ee dalka Mareykan ka ayaa laga soo sheegay in laga arkay bisha, taas oo fududeysay in ay maanta Soomaan qaar kamid ah muslimiinta ku nool dhul weynaha Mareykan ka.
Dhanka kale fatwo ay soo saareen culimada dalalka Sucuudiga, Qatar, Imaaraadka, Jordan iyo qaar kale oo kamid ah caalammul islaami ayaa lagu xaqiijiyay in la buuxin doono soddonka shacbaan, islamarkaana maalinta Khamiista ah ay tahay kowda bisha Ramadan.
Waxa aan ugu tahniyadeyneynaa dhammaan dadka Muslimiinta meel kasta oo ay joogaan bisha barakeysan ee Ramadan bilashadeeda.
Akhriso:-Waa sidee xaaladda deegaanka Tukaraq Ee gobolka Sool